९ अर्वको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि गर्न डा. भट्टराईलाई कांग्रेसको चुनौती - anamolpost.com
९ अर्वको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि गर्न डा. भट्टराईलाई कांग्रेसको चुनौती
२५ आश्विन २०७७, आईतवार १६:३०
काठमाडौँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा भएको अरवौं भ्रष्टाचारमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएको बिषयमा नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ती जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले लगाएको उक्त आरोपप्रति काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाउँदै भ्रष्टाचार पुष्टि गर्न चुनौती समेत दिएको छ ।
आइतबार काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोप लाग्ने प्रमाणको दाबा पुष्टि गर्न डा भट्टराईलाई चुनौति दिएका हुन् । उक्त आरोपप्रति गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चार माध्यम र अख्तियारलाई विज्ञप्तीमार्फत अपील समेत गरिएको छ ।
नेता भट्टराईले असोज २२ गते एक सभालाई संवोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा मिलेर बूढीगण्डकी जनविद्युत् आयोजनामा नौ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । जुन कुराले नेपाली राजनीतिमा नयां तरँग ल्याइदिएको छ ।
“बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र त्यसमा नेपाली काँग्रेसका सभापति समेतको संलग्नता रहेको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई नेपाली काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ,” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
-डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार ?